बिहिबार कुन देवी-देवताको पूजा गर्ने ? थाहा पाउनुहोस पूजा गर्ने विधि सहित ! - उपयोगी info
December 23, 2021 Pradeep karkiLeaveaComment on बिहिबार कुन देवी-देवताको पूजा गर्ने ? थाहा पाउनुहोस पूजा गर्ने विधि सहित !
हिन्दु धर्ममा हप्ताको हरेक वारलाई देवी-देवताको वार मानिने गरिन्छ । विशेष व्रत र उपवास बाहेक अधिकांश हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले हप्ताको कुनै एक वा दुईदिन सोहि वार अनुसारको देवताको पूजा गरि व्रत बस्ने गर्दछन्। हेरौँ, बिहिबारमा कुन देवी-देवताको पूजा गरिन्छ ।
बिहिबार नेपाली पात्रो अनुसार बिहिबार हप्ताको पाँचौं दिन हो । यसलाई गुरूबार वा बृहस्पतिवार पनि भनिन्छ । ज्योतिषशास्त्र अनुसार यसलाई बृहस्पति ग्रहको नामले नामाकरण गरिएको हो । हिन्दू धर्मावलम्बीहरू विहिबारमा भगवान विष्णुको पूजा गर्दछन्। पुजाको सामग्रीमा दूध र घ्यू समावेश गर्नुपर्दछ। व्रत बस्नेहरूले एकछाक दूग्ध पदार्थ खानुपर्दछ। अधिकांश व्रतालुहरूले यस दिन श्रीमद्भागवत पुराण पनि पाठ गर्दछन् । हिन्दू धर्मका आराध्यदेव भगवान विष्णु जसको बर्णन हिन्दू धर्म ग्रन्थहरूमा पाइन्छ । जसलाई यो संसारको पालनकर्ता मानिन्छ ।
पुजा सकिएपछि किन माग्न पर्छ भगवान संग क्षमा ? यस्तो छ विशिष्ट कारण
October 23, 2021 Pradeep karki
महिलाले साँझ परेपछि कहिल्यै नगर्नु यी काम : अनिष्ट हुन्छ !
October 22, 2021 October 22, 2021 Pradeep karki
यस्तो शक्तिशाली मन्दिर जहाँ पुग्दा यस्तो सम्म हुने गर्दछ